PSJTV | ओलीले विपक्षीलाई दिए नन्दीभृंगीको उपमा !
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षीलाई ‘नन्दीभृंगी’ को संज्ञा दिँदै आन्दोलन नगर्न सुझाएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आइतबार ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा खोलौं बैंक खाता अभियान’ शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैले आन्दोलन भनेर सिट्टी फुक्दैमा जनता नकुद्ने दाबी पनि गरे। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
११ विद्यार्थी संगठनद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलन आह्वान गरेका थिए।
‘अस्तिका दिन पनि १३ वटा विभिन्न आकार प्रकारका नन्दीभृंगी भेला भएछन् र आन्दोलन गर्छौं भनेछन्। म अरू केही भन्दिनँ, नगर्नुस् मात्र भन्छु,’ विपक्षी दलतर्फ लक्ष्य गर्दै ओलीले प्रश्न सोधे, ‘जसले आन्दोलन भनेर सिठी फुक्छ, त्यसैको पछि कुद्छन् नेपाली जनता? के यो सम्भव छ ?’
‘दुई झरी पानीले भिज्दा पनि केही नहुने बैंसका मान्छेलाई बिमाको त्यति आवश्यक नहोला तर लौरो टेकेर हिँड्नेलाई बिमा र बैंक अत्यावश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले मानवअधिकारको नारा पिट्नेहरूले यस्ता काम नदेख्ने भन्दै मानवअधिकारवादीप्रति पनि कटाक्ष गरे।
‘मानवअधिकारको मापन गर्न फेद टुप्पो नभएको फित्ता लिएर हिँडिरहेका छन्। मानवअधिकारको उच्च आधार मानवीय र सामाजिक भावना हो। सरकार यसमा स्पष्ट छ। सरकार मानिस जन्मेदेखि मृत्युदेखिका आवश्यक कुरा उपलब्ध गराउन लाग्नेछ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकार भएको भन्दै आधारभूत मानवअधिकार पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीकाे कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमण तय
काठमाडौ: अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्यो गर्मी बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दुई दिनदेखि काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस रहेको छ। शनिबार काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम ३३ र ...
कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूले महासमितिको निर्णयअनुसार पार्टी अघि नबढे विशेष महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर अभियान चलाउने चेतावनी दिएका छन् । पुस पहिलो साता बसेको महासमिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य पनि तल्लो तहबाटै निर्वाचित ...